सलाम छ यस्ता वडाध्यक्षलाई! जस्को रगतले बचिन् यी महिला!! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > सलाम छ यस्ता वडाध्यक्षलाई! जस्को रगतले बचिन् यी महिला!!
admin November 6, 2020 जीवनशैली, समाचार, समाज	0
एजेन्सी। रक्त अल्पता भएर शैलेश्वरी अस्पताल दिपायल पिपल्लामा भर्ना भएकी डोटीको केअइसिंह गाउँपालिका–४ की धौलीदेवी विष्टको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले दान गर्नुभएको रगतले ज्यान बचेको छ । विष्ट लामो समयदेखि रक्ताअल्पतासहित सेभर एनमिया भएकी उहाँ उपचारका लागि उक्त अस्पतालमा गएराति आउनुभएको थियो । समयमै रगत नपाएको भए उहाँको ज्यान सम्म जाने सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
यहाँका बिरामी तथा अपरेसन गरेका व्यक्तिलाई ब्लड दिनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहदै आएको दिपायल पिपल्लाका स्थानीयवासी तथा व्यापारी सर्वजीत देउवाले बताउनुभयो । रगत दान गरे बिरामी परिनुका साथै कमजोर भइन्छ भन्ने यहाँका स्थानीयवासीमा परेको नकारात्मक सोचका कारण प्रायः रगत दान गर्न नमान्ने गरेको पनि पाइएको छ । वडाध्यक्ष खड्काले रगत नपाउँदा समस्यामा परेकी महिलालाई रगत दान गर्न पाउँदा आफू निकै खुशी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानवीय धर्म निर्वाह गरेर अरुको ज्यान बचाउन आफूले रगत दिन पाएँ, निकै खुशी छु, मेरो रगतले कसैको ज्यान बच्यो ।”
जिल्लामा वर्षौपछि करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गराएको हो । करदाता सेवा कार्यालयले आफ्नो सेवा शुरु गरेपछि करसम्बन्धी सामान्य कामका लागि कैलाली जानुपर्ने यहाँका स्थानीय सेवाग्राहीको समस्या पनि समाधान भएको छ ।
आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने गरी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ छाउनीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नजिक रहेको सड्क डिभिजनको भवनबाट कार्यालयले आफ्नो सेवा प्रवाह गरेको कार्यालय प्रमुख हरि शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यालयबाट आज कृषि र्फमका लागि िपहिलो प्यान नम्बर दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ गोसेडाकी हरूदेवी साउदले लिनुभएको छ ।
बिहे भएकाे डेढ महिनामै श्रीमतिसँग यसो भनेर घरबाट निस्केका बिजय अब कहिल्यै नफर्किने भए (भिडियो हेर्नुस्)